‘आमा बन्न पाउँदा उत्साहित छु’ « Mero LifeStyle
‘आमा बन्न पाउँदा उत्साहित छु’
सरिता थारू	|| 15 May, 2021
अभिनेत्री ऋचा शर्मा आफू आमा बन्दै गरेको कुरा केही समय अघि सामाजिक सञ्जालमार्फत खुलाएकी थिइन् । त्यो सँगै उनलाई बधाई तथा शुभकामनाको ओइरो लाग्यो । २०७६ साल मंसिर ११ गते दिपेक्षविक्रम राणासँग विवाह गरेकी शर्मासँग मेरोलाइफस्टाइलले गरेको ‘गर्भ वार्ता’:
आमा बन्दै हुनुहुन्छ, कस्तो महशुस भइरहेको छ ?
एकदमै खुसी र गर्व महशुस भएको छ । आमा बन्न पाउनु महिलाको सौभाग्य हो । मैले पनि यतिबेला नयाँ जीवनलाई गर्भमा हुर्काइरहेको छु । यो बेला आमाको माया कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव गर्ने मौका पाएकी छु । त्यसैले उत्साहित छु ।
छोरा वा छोरी के भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहनुहुन्छ ?
मेरो पहिलो बच्चा हो । मलाई छोरा वा छोरी जे भए पनि हुन्छ ।
पौष्टिक आहार के–के खादै हुनुहुन्छ ?
घरमा पाक्ने प्रायः खानेकुरा पौष्टिक नै हुन्छ । घरमा पाकेको ताजा, मौसम अनुसारको हरियो तरकारी, माछा, मासु, दुध र दही नियमित खान्छु । दिउँसो भोक लागेमा दही र फलफुल खान्छु । मलाई दाल भात तरकारी एकदमै मन पर्छ । यस्तै, नट्सहरु पनि खाइरहेको छु ।
नियमित गर्भ जाँच गराउनुभएको छ कि छैन ?
निषेधाज्ञामा हुनु अगावै गर्भ जाँच गराई सकेको छु । अहिले कोरोना फैलिरहेकाले चिकित्सकले अस्पताल नआउनु भन्नु भएको छ । तैपनि, डाक्टरसँग नियमित सम्पर्कमा छु । रगत वा अन्य केही जाँच गर्न परेमा घरमै बोलाउँछु ।
गर्भवती भइसकेपछि के–कस्ता शारीरिक परिवर्तन देखा परेका छन् ?
मलाई अहिलेसम्म अरुले भनेको जस्तो गाह्रो भएको छैन । पहिलो तीन महिनामा मैले नियमित काम गरेँ । आफ्नै होम प्रोडक्सनको एउटा फिल्म र एउटा वेब सिरिज बनाएँ । त्यसैले खासै समस्या त भएको छैन । तैपनि, यस्तो बेला विभिन्न परिवर्तनहरु चाहिँ देखा पर्ने रहेछ । सुरुसुरुमा खानामा अलिअलि अरुची थियो त्यसकारण तीन महिनामा तीन–चार किलो तौल पनि घटेको थिएँ । अरु सामान्य छ ।
यस्तो अवस्थामा गर्भवती महिलाले के–के गर्नुपर्ने रहेछ ?
अहिले देश महामारी विरुद्ध लडिरहेको अवस्था छ । सामाजिक सन्जालहरुमा विभिन्न भ्रामक र त्रसित समाचारहरु आइरहेका छन् । जसले गर्दा विशेषगरी गर्भवती महिला यस्तो अवस्थामा सामाजिक सन्जालबाट टाढा बस्दा नै राम्रो हुन्छ । किनभने गर्भवती महिलाले धेरै चिन्ता लिनु हुँदैन । यसैगरी गर्भावस्था सामान्य छ भने विभिन्न योगाहरु गरेर, घरभित्रै हिँडेर पनि समय शरीरलाई चलायमान गराउन सकिन्छ ।
दिनहरु कसरी बिताउँदै हुनु हुन्छ ?
परिवारसँग रमाइलो गर्छु । रमाइलोका लागि लुडो खेल्छौं, तास पनि कहिलेकहिँ खेल्छौं । लकडाउन हुनुभन्दा अघि २०, २२ वटा किताब किनेर ल्याएको थिएँ । अहिलेसम्म २, ३ वटा किताब पढेर सकिसकेँ । कहिले भजन सुन्छु, गीत सुन्छु, शारीरिक अभ्यासका लागि घरभित्रै डुल्छु । यसरी नै अहिलेसम्म दिन बितिरहेको छ ।
कोरोना महामारीमा आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्नु भएको छ ?
निषेधाज्ञा जारी छ । घरबाट कहीँ निस्किएको छैन, कसैसँग भेटेको छैन, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको छु ।
डेलिभरी डेट कहिलेको छ ?
चिकित्सकले भदौ वा असोज हुनसक्छ भन्नुभएको छ ।
बच्चाको नाम के राख्ने सोच्नुभयो ?
छोरा भएमा यो राखम् छोरी भए यो राखम् भन्ने परिवारमा सल्लाह त भइरहेकै छ । आफन्तहरुले पनि नाम सिफारिस गरिरहनुभएको छ । तर, मैलै सोचेको छैन । परिवारले नै सल्लाह गरेको तीन चार वटा नाम छन् सबैको चित्त बुझ्ने नाम राख्छु ।